Cuntada & Nafaqada Archives - Page 4 of 8 - Daryeel Magazine
Sinjibiishu waxa ya ka mid tahay dhirta dhaqan ahaan iyo cilmi ahaanba la isla qirsan yahay in dawo ahaan loo isticmaali karo, taariikh ahaanna muddo dheer ayaa uu aadamuhu geedka Sinjibiisha u isticmaalayey dawo ay kula tacaalaan xanuunno badan. Dhinaca kalana cilmiga casriga ahi waxa uu qirsan yahay in dawo dhireedka la hubaa ay ka tayo badan tahay dawada sancayska …
Daraasad Mareykanka ayaa lagu ogaaday in dadka si joogta ama nidaamsan u cabba bunka ay yartahay in ay u dhintaan sababo badan, oo ay ka kamid tahay cudurada wadnaha iyo macaanka, marka la barbar dhigo kuwa bunka aanan waligood cabbin gabi ahaan. Mar kaste oo ay cabaan bun dheeraad ah ka qayb-galayaasha daraasaddan waxa yaraatay halista dhimashada , waxa kale …
Natiijooyin daraasaddo Maraykan ayaa sheegtay in cunista midhaha lawska qaybta loo yaqaano (Walnut) maalin kaste laga yaabo in aad kaga kaaftoonto in aad u tagto dhakhtar ugu yaraan kuwa u nugul cudurka macaanka. Markii ay quuteen 56 gram ama 14 xabadood oo midhahan ah maalin kasta muddo 6 bilood ah waxa wanaagsanaaday hawl qabadka xididdada dhiig mareenadooda,waxana hoos u dhacay …
Cuntooyinka Yareeya Isku Buuqa (Stress)
Qofka oo xaaladiisu nafsad ahaan amma cawaasiiftiisu kacsan tahay oo isku buuq (Stress) la soo darso, haddii uu cuno cuntooyinka fudud fudud waxa kor u kaca hormoono iyo dux badan oo jidhkiisa ku kaydsan, kuwaasoo ku keena in xaaladiisu ka sii darto sida lagu sheegay cilmi-baadhiso caafimaad oo tiro badan oo Maankaab soo xigtay. Haddaba, marka uu qofku xaaladahan degenaansho …
Waxaa mahad iska leh ALLAAH ,nabadgalyo iyo naxariisna Kan inta ALLAAH soodiray ugu sharaf badan korkiisa hayeelo, Nedigeena Muxammad, ahalkiisa, asxaabtiisa iyo qofkasta oo si fiican u raaca illaa Qiyaamaha. Intaa kabacdi Su’aasha ah “Maxeey yihiin vitamins-ka aan ubaahannahay? Jawaabteedu waa eey iska fududahay, oo waxaa waaye “Dhamaantood ayaan ubaahannahay”,waxaa yeelay midkasta oo kamid ah qeybaha kala gadisan ee aay …
Dad baddan waxay ka cawdaan xannuunada indhaha ku dhaca oo badankooda ka kaxeeya aragga dhaw iyo ka fog labadaba, sidaa darteed waxa jira cuntooyin ka hortaga dhibaatooyinka bani’aadamka ka soo wajaha dhinaca aragga. Maadaama indhuhu ka mid yihiin xubnaha ugu muhiimsan ee aadamaha, waxa fiican in qofku ilaaliyo caafimaadkiisa, isla markaana quuto cuntooyin ay ku badan yihiin macdanaha Lutien, Omega-3 …
Nabi Maxamed (NNKHA) waxa uu muslimiinta uga tegay waxyaabo sunno ah oo ay akhlaaqiyaadkiisa kaga daydaan, isla markaana dhaqan wanaag u ah, sidoo kale waxa uu uga tagey waxyaabo dawo ah oo ka mid ah cuntooyinka iyo khudaarta wax laga cuno. Sida uu tilmaamay khabiir islaam ah oo la odhan jiray Inb Al Qayyim, ilaalinta caafimaadku waa saddex dariiqo mid …
Waxtarka Saliida Qumbaha (Coconut Oil)
Cilmi baaris lagu sameyeey aya lagu ogadey in saliida qumbaha iney jirka ka caawiso in uu iska difaaco fayraska iyo bakteeriyada. waa saliid aad u qimo badan oo ay tahay inay guri walba taalo. Maqaarka ayaa mar la marsadaa, marna wad qadaneysaa, xata cuntada ayaad ku karsan kartaa. Saliida qumbahu waxa ay xamili kartaa dab aad u kulul. xaga saliidaha …
Faaidada Beytaraafku U Leeyahay Dadka Qaba Dhiig-karka Iyo Wadne Xanuunka
Cilmibaadhis dhowaan Maraykanka lagu sameeyey ayaa daahfurtay in sharaabka khudradda Beytaraafku (beetroot) uu wanaajiyo awoodda dul-qaadasho ee wadnuhu u yeelanayo jimicsiga iyo ciyaarta, isla markaana uu xakameeyo dhiigkarka dadka da’da ah ee wadne xanuunka leh. Cilmibaadhayaal ka tirsan Xarunta caafimaad ooo hoos timaadda jaamacadda Wake Forest ee dalka Maraykanka ayaa tijaabooyin cilmiya oo ay sameeyeen ku ogaaday in maalin kasta …
Huruuda oo afka qalaad lagu yiraahdo Turmeric ama Curcuma ayaa dawo ahaan loo isticmaali jiray kumanaan sano ka hor dalalka India iyo China. Dhowrkii sano ee u dambeeyay ayay saynisyahanadu iyo cilmi baarayaasha casriga ahi ogaadeen in huruudu tahay dawo dabiici ah oo lagula tacaali karo xanuuno badan Sidoo kale mudo aad u dheer ayay dadku u isticmaalayeen xawaash ahaan …
Saynisyahanka Caafimaadka ayaa ku taliyey isticmaalka khudaarta cagaaran oo ay sheegeen in ay u fiican tahay caafimaadka Indhaha dadka, iyada oo ay aad ugu sii fiican tahay dhanka araga oo ay kordhiso. Khubaradan saynisyahanka ah oo ka socday jaamacadda University of Harvard qaybteeda caafimaadka ayaa sheegay in cunitaanka Kaabashka iyo khudaarta kale ee cagaarani keento in ay indhuhu helaan awood …
Cunista Beerka Adhiga Iyo Caafimaadka
Waa shaki la’aan in cunista noocyada kala duwan ee hilibku ay faa’idooyin aan la soo koobi Karin u leedahay quudinta iyo nafaqaynta muruqyada, lafaha iyo neerfayaasha qofka, isla markaana ay xoojiso dhismaha jidhka. Hilibku waxa uu jidhka siiyaa tamar iyo firfircooni uu hawlihiisa ku qabsan karo. Xeeldheerayaasha nafaqaynta iyo caafimaadka cuntada ayaa sheegay in beerka digaagga iyo iduhu ay ka …
Maxaa Ka Jira In Shaaha Bigayska Ahi Adkeeyo Lafaha Jidhka? (DARAASAD)
Daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday haddii qofku maalintii cabbo saddex koob oo shaah bigayska ah inuu 30% ka badbaadayo xannuunada jajabiya lafaha, marka laga reebo waxyaabaha Ilaahay qadaray ee aan cidna joojin karin. Khubarada daraasaddan diyaariyey, ayaa tilmaamay in shaahu noqon karo hub lagula dagaalami karo xannuunka jilciya lafaha (Osteoporsis), kuwaasoo keena in lafuhu u nugladaan inay jabaan. Daraasaddan …
Sabiibku waxa uu ka mid yahay waxyaalaha lagu dhex darro cuntooyinka marka la karinayo oo aynu aaminsanahay inuu wanaajinayo dhadhankiisa, laakiin waxa jirta faa’iidooyin kale oo uu si gaarka ah ugu leeyahay jirkeenna sida:- Sabiibku waxa uu u fiican yahay dadka ay aad hoos ugu dhacaan unugyadooda dhiigga cas, oo ah xaaladda afka qalaad lagu yiraahdo Anemia (Aneemiya) Sabiibku waxa …
Timirta oo sida laga warqabo leh faa’idooyin caafimaad oo aad u badan, ayaa ay khubarada caafimaadku sheegayaan in ay cunisteedu muhiim tahay xilliga Jiilaalka oo ay qofka ka ilaaliso caafimaad darro badan. Timirta waxaa ku jira dhammaan curiyeyaasha nafaqo ee aasaasiga ah ee qofku maalintii u baahdo, waxaa ka mid ah Faytamiino, Macdanno kala duwan, Kalshiyaam, Xadiid, Bootaasiyaa, Gulukoos dabiici …